ဘော်ဒါတွေစုပြီး အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ Chill လို့ကောင်းတဲ့ MR BAR & GRILL – FoodiesNavi
Bar သန့်သန့်လေးကို ဘော်ဒါတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အေးအေးဆေးဆေး Chill လို့ကောင်းမယ့် MR Bar & Grill ကိုလမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ Juice တွေ Milk Shake တွေပဲသောက်မလား ? Cocktail တို့ Wine တို့လောက်နဲ့ပဲတင်းတိမ်မလား ? Beer တွေ Alcohol တွေနဲ့လွင့်မလား ? လုံးဝရှယ် Chill လို့ကောင်းမယ့်နေရာလေးတစ်ခုပါ။
အြမည်းတွေအနေနဲ့လိုက်လိုက်ဖက်ဖက် မြည်းနိုင်သလို Juice နဲ့တွဲစားလည်းဂွတ်တဲ့ အသီးအရွက်စုံတန်ပူရာ ၊ အိအိစက်စက်အာလူးလေးတွေကို ယူနန်စတိုင်သုပ်ပေးထားတဲ့ ယူနန်အာလူးသုပ် ၊ ချိုမြလတ်ဆတ်တဲ့ပုဇွန်ကို ပိန်းဥဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ ရောစပ်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Prawn Pancake ၊ အကင်နံ့သင်းသင်းလေးရနေတဲ့ ကြက်သားမွမွလေးကို Sauce ဆန်းဆန်းလေးနဲ့တို့စားနိုင်မယ့် ကြက်ဆာတေး ၊ အသားပြည့်ဝနေတဲ့ ဂဏန်းကြီးတွေကို အရသာစိမ့်ဝင်အောင်ကြော်ပေးထားတဲ့ ဂဏန်းပျော့ကြော် ၊ Beer နဲ့မြည်းမြည်း Alcohol နဲ့မြည်းမြည်းအလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်စေမယ့် ထျုင်းစတိုင်ကြက်ဥမွှေကြော် ၊ ပျောပျော့အိအိဂျပန်တို့ဟူးလေးတွေကို အရွက်အသီးစုံစုံလေးနဲ့ နူးနူးအိအိလေးချက်ပြုတ်ပေးထားတဲ့ Fried Japanese Tofu with mix vegetables ၊ ချိုမြတဲ့ငါးရှဉ့်လေးတွေကို ရှမ်းနံနံရနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ခြောက်ခြောက်လေးချက်ပေးထားတဲ့ ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ် ၊ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ပုဇွန်အစိမ်းလေးတွေကို သခွားသီးအေးအေးလေးနဲ့ ချဉ်ငံစပ်လေးသုပ်ပေးထားတဲ့ ပုဇွန်အစိမ်းသုပ် ၊ အသားထူထူနဲ့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ငါးကြီးတွေကို အတွင်းငါးအသားလွှာထိ ချဉ်စပ်အရသာလေးတွေ စိမ့်ဝင်အောင်ချက်ပေးထားတဲ့ ငါးချဉ်စပ် ၊ အမဲသားမွမွလေးတွေကို ကြွပ်ကြွပ်ရွရွလေးကြော်ပေးထားတဲ့ အမဲသားအကြွပ်ကြော်စတဲ့စားဖွယ်ရာတွေအပြင် အကင်မျိုးစုံကိုလည်းရနိုင်ဉီးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရသာကထူးခြားကောင်းမွန်သလို ဈေးနှုန်းကလည်းသင့်တင့်ပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့အပြင်အဆင်လေးတွေကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်မှာပါ။ ဘောလုံးပွဲရှိတဲ့နေ့တွေဆိုလည်း ဘော်ဒါတွေစုပြီးပျော်ပျော်ပါးပါး စုစည်းကြည့်နိုင်ဦးမှာနော်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၁)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ MR Bar & Grill ရဲ့လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၁၇၅) ၊ (၂၉)လမ်းအပေါ်ဘလောက် ၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/mrbar&grill